Termux 0.73 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.73 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Termux
Termux ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Termux တစ်ခုကျယ်ပြန့် Linux ကိုအထုပ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူအစွမ်းထက် terminal ကိုအတုယူပေါင်းစပ်။
•အကား Bash နှင့် zsh ခွံခံစားပါ။
• nano နှင့် vim နှင့်အတူ Edit ကိုဖိုင်များကို။
• ssh ကျော် Access ကိုဆာဗာများ။
•, clang နှင့်အတူကို C အတွက်ကိုတိုးစေခြင်းနှင့် gdb ။
•တစ်အိတ်ကပ်ဂဏန်းတွက်စက်အဖြစ် Python နှင့် console ကိုသုံးပါ။
• git နှင့်အဖျက်သမားတွေနဲ့စီမံကိန်းများကိုထွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
• frotz နှင့်အတူ Run စာသားမ-based ဂိမ်း။
ပထမတော့သေးငယ်တဲ့အခြေခံစနစ်က start download ပြုလုပ်ပြီး - တပ်မက်လိုချင်သောအ packages များထို့နောက် apt အထုပ်မန်နေဂျာသုံးပြီး install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ terminal ကိုတာရှည်-နှိပ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအားဖြင့် built-in အကူအညီနဲ့ရယူပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အကူအညီ menu ကို option ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
အဆိုပါ Termux IRC စကားပြောခန်း join လိုပါသလား?
freenode အပေါ် #termux
Termux အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Termux အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Termux အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Termux အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 2.3k 3.29M
Termux ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Termux အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.73
ထုတ်လုပ်သူ Fredrik Fornwall
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://termux.com/privacy-policy.html
App Name: Termux
File Size: 215.29kB
Release date: 2019-08-05 06:44:39
လက်မှတ် SHA1: A9:66:C9:F8:87:F0:E7:EA:85:91:21:68:6F:75:2F:31:D0:69:74:0D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): mobilepearls.com
အဖွဲ့အစည်း (O): Mobile Pearls
Termux APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ